Welwel ay bulshadu ka qaadey dhacdooyinkii xabadeeynta ee Göteborg - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Welwel ay bulshadu ka qaadey dhacdooyinkii xabadeeynta ee Göteborg
Xabadda iska wiifeeysa cid walba ayay haleeli kartaa
La daabacay torsdag 12 september 2013 kl 14.53
Xabadeeyntii is-daba joogga aheyd ee toddobaadkii ina dhaafay ka dhacayey qeybo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Göteborg ayaa welwel ku abuurey bulshada ku dhaqan nawaaxiga Hisingen oo arbacadii toddobaadkii ina dhaafey laba ruux u geeriyoodeen weerar xabado ah oo lala begsadey, isla-markaana ey ciidanka ammaanku weli ku raad-joogaan ciddii falkaasi ka dambeeysay. Sidoo kale ayaa jimcadii iyo axaddii isla toddobaadkaa sidoo kale ey ka dhaceen rasaas goobahaa oo uu gu yaraan uu hal shakhsi ku dhaawacmay.
Haddaba booqasho idaacadda caalamigu ku tagtay nawaaxiga Hisingen ayaannu kula kullaney haweenay ka gaabsatay iney magaceeda sheegto, hase yeeshe u sheegtay idaacadda iney cabsi ballaaran ka qabto dhacdooyinka iska soo daba-noqononqanayey ee nawaaxigaa ka dhacaya. Iyadoona intaa raacisay iney joojisay baashaalkii ey fiidadkii u bixi jirtay:
- Nawaaxigan waxaan deggenaa illaa iyo 1996-kii, hadda waa ay is-bedeshay xaaladdu. Wixii halka ka dhacay, mana ahan oo keliya nawaaxigan. Meelahaa sarena waa ey ka dhacday. Caawadan (waa xalay’e) waxaan tegi lahaa shir, laakiin waan u sheegay inaanan iman karin. Maadaama aan joojiyay socodkii aan socon jiray kolka qorraxdu dhacdo ama mugdigu bilowdo.
Fiid-nimadii toddobaadkii ina dhaafay arabacadiisii ayaa laban in oo da’doodu aheyd 28 iyo 17-jirro xabbado lala beegsaday nawaaxiga waddada Väderilisgatan ee xaafadda Biskopsgården. Iyada oo 17-jirka loola cararay cusbitalka isaga oo dhaawac ah, iyadadoona shaaca laga qaadey isla-habeen-nimadii saacaddu kolkay ahayd 00:30 in labaduba ey ku naf waayeen weerarkaa. Waana midda sababtay in cabsiyi ka dhalato nawaaxigaa:
- Kolkii aan xaafaddan soo degey keligey ayaa u socod tegi jiray keeynta. Iminka middaa waan joojiyey. Waxaan socsocdaa maalintii oo keliya. Qaasatan ma aado keyntaa sare iyada o farta noogu fiiqaysa keeyn dusha ka saaran halka aannu taagannahey, ahaydna goobta lagu diley labada wiil. Waxaanan ku fekeraa sidii aan meeshan uga guuri lahaa.
Isla-goobta ayaan sidoo kale kula kullanay oday muddo tobaneeyo sannadood aheyd nawaaxigaa ku dhaqnaa oo sidoo kale ka gaabsady inuu magaciisa sheego, hase yeeshee nagu war-geliyay in sannooyinkii ugu dambeeyey uu ammaanka xaafaddu ka soo darayay:
- Aad iyo aad ayey uga sii xumaatay xaaladda nawaaxigan. Iminka waxaa ku darsoontay xabbadaha faniinkooda. Xabado aanan garanyn halka ey ku socdaan ama ku wajahan yihin. Waxeyna dhibaateeyn karaan cid aan wax dembi ah ku lahayn, sida uu hadalka u dhigay. Isagoona intaa raaciyay inaanu dhankiisa ku tala-jirin inuu nawaaxigaa ka guuro cabsi daraateed, maadaama aanu wakhti badan u harsanayn, isaga oo midda ua jeeday da’diisa.
Cabsida ka jirta nawaaxiga ayuu sidoo kale inooga warramey mar aannu wareeysi ku tagna yxarunta dhallaanka ee xilliyada fasaxa – Fritidsgård ee ku taala nawaaxigaa madaxa laanta dhaqanka iyo hoowlaha dhallaanka ee xilliyada fasaxa ey yihiin ee galbeedka Hisingen Henrik Dahlkvist. Mar uu middaa sawair innaga siinayey wuxuu yiri:
- Waxay aniga ila tahay in dadka oo indhahooda la eego oo keliya laga dareemeyo cabsida iyo sida ey taxadarka u yihiin kolka ey raaceyaan gaadiidka dad-weynaha. Waalidiin badan ayaa dhallaankooda ka joojiyey iskuullada maalmihii ka dambeeyey dhacdadan:
- Waana mid ka dhigeeysa xaalad aan caadi ahayn xaafadda. Waxay u ekaanaysaa in xaafadda oo dhami ey u xabisan tahay cabsi. Waana mid ay adag tahay in dib loogu soo laabto sidii ay ahaan jirtay. Dhammaan dadka ku dhaqan nawaaxigan ayay saameeyn ku yeelanaysaa. Isla-markaana laga daeemeyo yaraanshaha imaatinka dhallaanka ee goobaha fasaxyada ey isku maaweeliyaan, sida uu sheegay Henrik Dahlkvist, ahna madaxa laanata xaafadda ee dhaqanka iyo hoowlaha dhallaanka ee xilliyada ey fasaxa yihiin.
Sidoo kale Mustafa Axmed oo isaga iyo reerkiisuba ku dhaqan yihiin magaalada Göteborg ayaa noo sheegay in nawaaxigaa ey ka jirto cabsi iyo dareen dhinacyo kala duwan taabanaya: